Ahoana ny fomba fanaovana thumbnails ho an'ny YouTube any Canva | Famoronana an-tserasera
Zava-dehibe ny sary kely ao amin'ny horonan-tsary, amin'ny farany dia io no zavatra hitantsika voalohany ary amin'ny tranga maro dia manapa-kevitra isika raha mahaliana antsika ny atiny na tsia mifototra amin'izay hitantsika amin'ity sary kely ity, izany no maha-zava-dehibe ny fitandremana. ny endriny. Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba fanaovana thumbnails ho an'ny YouTube any Canva ary manome anao hevitra vitsivitsy hampiharina amin'ny zavatra noforoninao izahay. Raha tsy mitantana an'ity fitaovana ity ianao dia aza manahy, tsy hanana olana ianao amin'ny fanaovana ny miniature anao satria mora be ny mampiasa azy, handao anao eto aho a fampidirana Canva fampidirana ho anao hahatratra.
1 Mamorona antontan-taratasy vaovao
2 Ovao ny loko afara
3 Mamolavola thumbnail mahaliana ho an'ny Youtube any Canva
4 Manampia sary PNG misy ambadika mangarahara
5 Manampia lohateny manazava sy mahasarika ny sain-tsaryo YouTube
6 Manampia atiny hita maso bebe kokoa
Mamorona antontan-taratasy vaovao
Hanomboka amin'ny famoronana rakitra izahay izay hamolavolantsika ny kely indrindra, raha mankany amin'ny "fisie", "mamorona endrika vaovao". Canva manampy anao Rehefa manapa-kevitra hoe inona ny refy mifanaraka amin'ny singa tsirairay, mila mandeha mankany amin'ny bara fikarohana ianao ary manoratra izay tianao hamolavola. Canva dia hampiseho maodely samihafa anao ary hanome anao ny mety hiasa amin'ny antontan-taratasy banga. Raha ny kely indrindra, ny Ny haben'ny tranonkala natolotra dia 1280px x 720px.
Ovao ny loko afara
Rehefa noforoninao ilay rakitra, manova ny loko ambadika. Mila tsindrio fotsiny ilay takelaka, ary tsindrio ny efamira miloko izay hita eo amin'ny zoro havia amin'ny sary eo ambony. Hisokatra ny takelaka misy ny safidy loko. Raha manana sary famantarana ianao dia afaka mampiasa ny lokony marina na dia tsy mitazona ilay kaody aza ianao. Ho an'izany hisintona ny fisie famantarana anao amin'ny efijery, halefa mivantana any Canva izy io. Rehefa ampidirinao ao anaty fisie io dia miverena amin'ny takelaka safidy safidy loko ary ho hitanao fa misy fizarana vaovao, "Palette misy sary", eo no anananao ny loko rehetra amin'ny logo anao. Rehefa mampiasa azy ireo ianao na manoratra ireo kaody dia azonao atao ny mamafa ny sary.
Mamolavola thumbnail mahaliana ho an'ny Youtube any Canva
Ireto torolalana homenay anao izao ny fomba fanaovana thumbnails ho an'ny YouTube, dia mifototra amin'ny tutorial. Ohatra fotsiny izy io izay afaka manome aingam-panahy, saingy mazava ho azy azonao atao ny mamela ny fahaizanao manidina sy manao endrika manokana kokoa. Miezaha fotsiny hanintona azy ny kely indrindra dia tsy maintsy mahasarika maso mba liana amin'ny horonan-tsarinao ny hafa.
Manampia sary PNG misy ambadika mangarahara
Manampy hisarika ny saina ny sary. Raha ianao no miteny ao anaty horonan-tsary, eTsara raha maka sary amin'ny endriny mahaliana ianao ary mampiasa ny sary ao amin'ny thumbnail. Eto, ohatra, dia hampiasa pikantsary iray amin'ireo horonantsary avy aminay fantsona Youtube anay.
Hesorinay ny sary any aoriana ka ny vokany dia tsara indrindra. Raha tsy hainao ny manao azy dia mamporisika anao aho hahita ity fampianarana ity izay ampianarinay anao hamorona PNG sary ao amin'ny Photoshop. Na izany na tsy izany, raha tsy tantinao ny fonosana Adobe misy fitaovana an-tserasera fafao ho azy ny ao ambadika.
Rehefa vonona ny sarinao, ampidino ao Canva izy ary apetaho. Raha tsindrio ny sary, eo an-tampon'ny efijery dia manana ny "effets" ianao, azonao atao ny mampiasa ny vokany azo ampiasaina hanome ny volon'ilay sary dia nampiharinay "Miolakolaka" ao amin'ny faritra "aloka".
Manampia lohateny manazava sy mahasarika ny sain-tsaryo YouTube
Ny zavatra manaraka izay hataonay amin'ny thumbnail dia ny lahatsoratra. Miezaha mandrakariva manampy lohateny misy famaritana, fohy ary manintona. Ao amin'ny lesonanampiasa tetika aho tsotra, nefa tena mandaitra.
Mandehana any amin'ny "element" ary tadiavo ny endriny toradroa. Hametraka azy eo amin'ny zoro havia ambony isika ary hiova ho mahitsizoro isikana. Hanova ny loko ihany koa isika, tsindrio eo amboniny ary tsindrio ny efamira miloko hita eo amin'ny tontonana ambony. Etazonia nomenay azy volon-davenona mainty be.
Rehefa manana ilay endrika ianao mankanesa any "text" dia asio lohateny. Nampiasa ny endri-tsoratra Raleway Heavy izahay, saingy afaka mifidy ilay tianao ianao, resaka tsiro izany. Soraty ny lohateny, omeo azy ny loko ambadika, ary hamerena ny habeny mba hifanaraka amin'ny zorony. Ho toy ny lavaka voasokitra ao anaty bika ilay lahatsoratra!
Afaka manampy lahatsoratra eto ambany ianao, manandrana mamaky foana ary ny ambaratongam-pahefana dia takatra tsara. Andramo atambatra ny loko isan-karazany.
Manampia atiny hita maso bebe kokoa
Azonao atao ny mampiditra singa hita maso izay manampy amin'ny fahatakarana ny lohahevitr'ilay horonantsary. Amin'ity tranga ity dia ny tutorial dia ny "fomba fanaovana thumbnails ho an'ny YouTube any Canva", izahay nandeha tany amin'ny "element" isika ary nitady ny logo Youtube. Amin'ny fampidirana azy anao Nampihatra ny vokatra "mamirapiratra" izahay, ao amin'ny fizarana "aloka". Alohan'ny hitehirizana sy hampiakaranao ny thumbnail anao ao amin'ny YouTube dia alao antoka fa mifanaraka tsara ireo singa rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba fanaovana thumbnails ho an'ny YouTube any Canva
Loharano inona izany? Fitaovana 3 hamantarana endritsoratra amin'ny Internet